NLD ၏ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးတင်ပြချက် တိုင်းရင်းသားများ၏ နှလုံးသား တို့ထိသလား – Federal Journal
NLD ၏ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးတင်ပြချက် တိုင်းရင်းသားများ၏ နှလုံးသား တို့ထိသလား
NLD အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားအရေး၊ ဖက်ဒရယ် အရေးကို အပြည့်အဝဆာင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် မူဝါဒထားရှိ သည်ဟု ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ရာ တိုင်းရင်းသားဒေသမှာ မဲအများစု သိမ်းကျုံးရခဲ့သည်။ တချို့တိုင်းရင်းသားပါတီအားပေးသူများက သံသယဖြင့် စောင့်ကြည့်ကြသည်။ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ ဖက်ဒရယ် အရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ခြုံငုံပြောရလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရေး (constitutional matter) ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် NLD ပါတီက တိုင်းရင်းသားများလိုလားသည့် မူဝါဒ အမှန် တကယ် ရှိ/မရှိသည် သူ၏ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ မူဝါဒ အဆိုပြုချက်မှာ အငြင်းပွားစရာမရှိ ပေါ်လွင်ပါပြီ။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၄၇ ခုနှစ် တွင် တောင်တန်းသားများ စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (SCOUHP)က အချက် (၇)ချက်ကို တင်ပြခဲ့ပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် တောင်ကြီး ညီလာခံမှာ ပြည်နယ်များ ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့က မူ(၅)ချက်ကို သဘောတူတင်ပြခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး(၄၅)ဦး ကော်မတီ မှာ တိုင်းရင်းသားပါတီများက အချက်ပေါင်း ထောင် ဂဏန်းတင်သွင်းခဲ့သည်ဆိုသော်လည်း ဖက်ဒရယ် အင်္ဂါရပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားများ အစဉ်အဆက် တောင်း ဆိုခဲ့သည့်အဓိကကဏ္ဍ သို့မဟုတ် မူ ဆိုလို့ (၁၂)ချက် ခန့်ဖြင့် စုစည်းလို့ရပါသည်။ ယင်းအချက်များအပေါ် NLD က ဘယ်လောက်အထိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးသ လဲ၊ အပြောနှင့် လက်တွေ့ဘယ်လောက် ညီညွတ်သလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်….
နိုင်ငံတော်အမည်၊ ပုဒ်မ(၂)ရခိုင်(ANP)ပါတီ၊ ရှမ်း(SNLD)နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားပါတီအများစုက နိုင်ငံအမည်နာမတွင် ]ဖက်ဒရယ်}ဆိုသည့် စကားရပ် ကိုဖြည့်စွက်ရန် အဆိုပြုဆွေးနွေးကြသော်လည်း NLD က ဆွေးနွေးခြင်းမရှိ။ ထို့ပြင် နိုင်ငံရေးစနစ်(ပုဒ်မ-၈)နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းရင်းသားပါတီများက “ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ”ဟု ဖက်ဒရယ်စကားရပ်ကို ရှေ့မှာထားချင် ကြသော်လည်း NLD က ဒီမိုကရေစီစကားရပ်ကို ရှေ့မှာထားရှိလိုသည်။
နိုင်ငံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (ပြည်နယ်မူ)၊ ပုဒ်မ(၉)(၄၉)တိုင်းရင်းသားပါတီအများစုက လူမျိုးနှင့် လူမျိုးများ အခြေခံ၍ ပြည်နယ် (Constituent Unit) ဖွဲ့စည်းရန်အဆိုပြုဆွေးနွေးကြသည်။ သို့သော် NLD ပါတီ က မှတ်ချက် တစုံတစ်ရာမပြုခြင်းဖြင့် လက်ရှိ ပုံသဏ္ဍာန်ကို သဘောကျကြောင်းပြသသွားသည်။ အသေးစိတ်အားဖြင့် ရှမ်း (SNLD)က လူမျိုးကြီး(၈)မျိုးကိုအခြေခံသော (၈)ပြည်နယ်မူကိုတင်ပြပြီး မွန်ပါ တီ (MNP)က အမျိုးသား (၈) ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီ၊ ပဲခူး၊ ရန်ကုန်နှင့် ဧရာဝတီ အမျိုးသားများ(၄)ပြည် နယ်၊ စုစုပေါင်းပြည်နယ် (၁၂)ခုမူကို တင်ပြခဲ့သည်။ (SNLD က ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ သီးခြား ထားရှိခွင့်ကိုလည်း အဆိုပြုသည်)။
ခွဲမတွက်ရ၊ ပုဒ်မ(၁၀)တိုင်းရင်းသားပါတီများ က ယင်းပုဒ်မကို ပယ်ဖျက်ဖို့ အဆိုပြုကြသည်။ ပုဒ်မ (၂၀)(င)မှာ ပြဋ္ဌာန်းသည့် ဒို့တာဝန်အရေး(၃)ပါးတွင် ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့ ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည့် အတွက် ဤကဲ့သို့သော အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့် ကန့်သတ်ချက်မှုသည် အပိုဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးကို တစ်ဆို့စေသည့် အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်လေရာ NLD အနေဖြင့် သဘောထားတင်ပြခြင်းမရှိခြင်းမှာ တပ်မတော်နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနှင့် တသဘောတည်းဖြစ်ကြောင်း ပြသရာရောက်သွားသည်။
မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ပုဒ်မ(၃၇)ဤပုဒ်မကြောင့် လက်ရှိအချိန် နိုင်ငံသားများ/တိုင်းရင်းသားများ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိ ဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၉)တွင် ချုပ်ဆိုသော ၂၁ ရာစုပင်လုံ၏ ပြည် ထောင်စုသဘောတူ စာချုပ်အပိုင်း(၁)မှာ နိုင်ငံ သားတိုင်း မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ထည့်သွင်းထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း NLD အနေဖြင့် ဆွေးနွေးရပ်တည် ပေးရန်ပျက်ကွက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ရှမ်းပါတီက ပြည် နယ်သားများပိုင်ဆိုင်မှုဟု တင်ပြပြီး မွန်ပါတီက တိုင်း ရင်းသားပြည်သူလူထုသည် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်ဟု အသီး သီးတင်ပြကြသည်။ တိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့် နိုင်ငံ သားမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်သက်သက်မဟုတ်ဘဲ တိုင်းရင်း သားမြေပိုင် ဆိုင်ခွင့်ကိုပါ အာမခံရလိုသည်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော်၊ ပုဒ်မ(၇၄၊ ၇၇၊ ၈၀) တိုင်းရင်းသားများက ပြည်ထောင်စုမှာ အာဏာ တူပေးသည့် လွှတ်တော်(၂)ရပ် စနစ်ထား ရှိရေးကို လိုလားကြသည်။ ယခု ၂၀ဝ၈ခြေ-ဥသည် လက်တွေ့တွင် လွှတ်တော်(၃)ရပ်သဖွယ်ဖြစ်ပြီး ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော် ထားရှိခြင်းဖြင့် တိုင်းရင်းသားများ အားကိုးသော အမျိုးသား လွှတ်တော်ကို လေဖြတ် အောင်လုပ်ထားသလိုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တိုင်းရင်း သားပါတီများက ယင်းအလွှာကို ပြင်ဆင်ရန် တင်ပြ ထားကြသော်လည်း ထုံးစံအတိုင်း NLD က ဆွေးနွေး ခြင်း လုံးဝမပြုပေ။
ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းခွင့်၊ ပုဒ်မ(၂၆၁)— ကိုယ့် ပြည်နယ်က ကိုယ့်ပြည်နယ်အစိုးရလွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ကို ဤပုဒ်မဖြင့် ပိတ်ပြင်ထားပြီး ဗဟိုမှ သမ္မတက တစ်ပြည် ထောင်စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခန့်အပ် သည်။ ယင်းသည် ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်ဆန့်ကျင်ပြီး တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို ပိတ်ပင် ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများ အပါအဝင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနှင့် တပ်မတော်ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်သင့်ပြီဟု အဆိုပြုကြပြီးဖြစ်သော်လည်း NLD က တစ်ခွန်းတစ်ပါဒမှ ဆွေးနွေးခြင်း မရှိခြေ။
မြို့နယ်နှင့် ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပုဒ်မ(၂၈၈) ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးအတွက် အက္ခရာကျသည့် မြို့နယ်နှင့် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို လက်ရှိထွေအုပ်ဌာန အစား လူထုတိုက်ရိုက် ရွေးကောက်သည့် စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲရန် အခြားပါတီများက အဆိုပြုကြသော် လည်း ဗဟိုအစိုးရအာဏာကို နောင်အစိုးရများတွင် ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ရန် ယုံကြည်မှုရှိသော ပြောင်းလဲ ချိန်တန်ပြီအစိုးရအနေဖြင့် ပြောင်းလဲလို ခြင်း မရှိပေ။ ပကတိအနေအထားကို အသားကျဟန် တူသည်။
ရုံးသုံးဘာသာစကား၊ ပုဒ်မ(၄၅၀) လက်ရှိတွင် မြန်မာစာ(ဗမာစာ)တစ်ခုတည်းကိုသာ ရုံးသုံးစာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည်။ အခြားတိုင်းရင်းသားဘာသာ စကားများကို အသိအမှတ်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့် ရှမ်း (SNLD) နှင့် ရခိုင်(ANP)ပါတီတို့က အိန္ဒိယနိုင်ငံကဲ့သို့ (၃)ဘာသာ ရုံးသုံးစာစနစ်မျိုးကို တင်ပြကြသည်။ မြန်မာ(ဗမာ)၊ အင်္ဂလိပ်နှင့် ပြည်နယ်ရှင်ဘာသာစကား များ စသည်ဖြင့်။ NLD သည် လက်ရှိစနစ်ကို စောဒက မတက်ပေ။
ဘာသာရေး၊ ပုဒ်မ(၃၆၁၊ ၃၆၃) ဤပုဒ်မများ သည် ဦးနု၏ အမွေဆိုးများဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ များတွင် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနထားရှိ ရိုးထုံးစံမရှိ။ ဘာသာရေးဘက်လိုက်မှု မရှိသင့်။ NCA စာချုပ် အပိုဒ်(၁)(င) မှာလည်း ‘ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ရောယှက်ခြင်းမရှိသော နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရန်’ဟု အတိအလင်း ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။ ရှမ်းပါတီက ပုဒ်မ(၃၆၁)၏ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဂုဏ်ထူးဝိသေသဖြင့် ပြည့်စုံသော (special position)ဆိုသည့်စကားရပ်အား ပယ်ဖျက်ရန်အဆိုပြုပြီး ကချင်ပါတီ(KSDP)က ပုဒ်မ (၃၆၃)ကို ပယ်ဖျက်ရန် အဆိုပြုသည်။ သို့သော် NLD က ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေရသည်။
အခြေခံဥပဒပြင်ဆင်ရေး၊ ပုဒ်မ(၄၃၆) စစ်မှန် သော ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးသည့်နိုင်ငံအများစု (အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ဆွစ်ဇလန်၊ ဩစတေးလျ၊ တောင်အာဖရိက စသည့်များ)တွင် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးမှာ ပြည်ထောင်စု(ဗဟို)လွှတ်တော်ဆုံး ဖြတ်ချက်သက်သက်ဖြင့် မပြီးပြတ်စေဘဲ ပြည်နယ် အများစု(လွှတ်တော်)၏ သဘောတူညီချက်ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ လူဦးရေအများစုက ကြိုက်သလို ခြယ်လှယ်နိုင်ခြေကို ထိုနည်းဖြင့် ထိန်းကြောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်သည် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ အထူးအရေးကြီးပါသည်။ NLD အနေဖြင့် ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးခြင်းမရှိပေ။
ကြွင်းကျန်အာဏာ၊ ပုဒ်မ(၉၈) ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ အများစုတွင်ြွကင်းကျန်အာဏာကို ပြည်နယ် (Subunit) များကို အပ်နှင်းလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ၂၀ဝ၈ ခြေ-ဥတွင် ဗဟိုကို ပေးထားသည်။ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဦးနု တို့ခေတ်ကတည်းကြွကင်းကျန်အာဏာကို ပြည်နယ် များကိုပေးဖို့ တစိုက်မတ်မတ်တောင်းဆိုခဲ့သည်နှင့် အညီ ယခုတွင်လည်း တိုင်းရင်းသားပါတီများက ထိုသို့ အဆိုပြု ဆွေးနွေးကြသော်လည်း NLD ကမူ နှုတ် ဆိတ်နေခဲ့ပါသည်။
ဥပဒေပြုစာရင်း၊ ဇယား(၁)(၂)(၃)(၅) ဖက်ဒရယ်စနစ်အရ ပြည်နယ်/ဗဟိုအာဏာခွဲဝေရေး တွင် လက်တွေ့အကျဆုံးဖြစ်သည့် ဤဥပဒေပြု ဇယားများတွင် လက်ရှိမှာ ဗဟိုက အဆီအနှစ် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို ထိန်းချုပ်ပြီး ဇယား(၁)တွင် ထည့်သွင်းပါသည်။ ပြည်နယ်များကို စည်ပင်၊ ယစ်မျိုး ခွန်၊ ကျောက်သွေးခွင့် စသည့် အကိုင်းအခက်များသာ အပ်နှင်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် ရှမ်း (SNLD) ပါတီက ဗဟို(ပြည်ထောင်စု)ဥပဒေပြုစာရင်း အချက်ပေါင်း (၁၅၀)ကျော်ထဲက (၅၄)ချက်ကို ပယ်ဖျက်ရန်နှင့် ၎င်းကို ပြည်နယ်ဥပဒေပြုစာရင်းတွင် (၁၆)ချက်၊ ပူးတွဲ ဥပဒေပြုစာရင်း (concurrent list)တွင် (၂၇)ချက်၊ ပြည်နယ် အခွန်ဇယား(၅)တွင် (၃)ချက် စသည် ဖြင့် အသီးသီး ဖြည့်စွက်အဆိုပြုသည်။ မွန်၊ ရခိုင်နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားပါတီများကလည်း အလားတူ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချသည့် အချက်များများကို တင်ပြကြသည်။ ထိုအချက်များတွင် တိုင်းရင်းသားများ လိုလားသော သယံဇာတခွဲဝေမှု၊ ပညာရေး (မိခင် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား အခြေပြုပညာ သင် ကြားရေး) စသည်တို့လည်းပါဝင်သည်။ သို့သော် NLD က တစ်ချက်မှ တင်ပြခြင်းမပြု။
ခြုံငုံသုံးသပ်လျှင် လက်ရှိ NLD ၏ (၁၁၄)ချက်ပါ ခြေဥပြင်ဆင်ရေး အဆိုပြုချက်များသည် ဒီမိုကရေစီရေး၊ တပ်မတော်အရေး၊ ပါတီတစ်ခုခါင်း ဆောင် နှောင်ကြိုး ပြေစေရေးနှင့် သမ္မတကဏ္ဍတို့ကို သာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး တိုင်းရင်းသားများအရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်အခြေခံဥပဒေ ပုံဖော်ရေးအပိုင်းကို မျက် ကွယ်ပြုထားပါသည်။ တပ်မတော်ကို မျက်နှာပူလို့ လားဆိုတော့လည်း တပ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် ပြင်သင့် ကြောင်း တရားဝင်ပြောထားသည့် ပုဒ်မ(၂၆၁)ကိုပင် မျက်နှာလွှဲချနေပြန်ရော။ သို့တည်းမဟုတ် NLD ၏ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ မူဝါဒလမ်းစဉ်မှာ တိုင်းရင်းသား အရေးကို အစကတည်းက ထိန်ချန်ခဲ့လေသလား။
NLD အနဖွေငျ့ တိုငျးရငျးသားအရေး၊ ဖကျဒရယျ အရေးကို အပွညျ့အဝဆာငျရှကျပေးနိုငျမညျ့ မူဝါဒထားရှိ သညျဟု ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲမှာ မဲဆှယျစညျးရုံးခဲ့ရာ တိုငျးရငျးသားဒသေမှာ မဲအမြားစု သိမျးကြုံးရခဲ့သညျ။ တခြို့တိုငျးရငျးသားပါတီအားပေးသူမြားက သံသယဖွငျ့ စောငျ့ကွညျ့ကွသညျ။ တိုငျးရငျးသားအရေး၊ ဖကျဒရယျ အရေး၊ ငွိမျးခမျြးရေးသညျ ခွုံငုံပွောရလြှငျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒအေရေး (constitutional matter) ဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ NLD ပါတီက တိုငျးရငျးသားမြားလိုလားသညျ့ မူဝါဒ အမှနျ တကယျ ရှိ/မရှိသညျ သူ၏ အခွခေံဥပဒဆေိုငျရာ မူဝါဒ အဆိုပွုခကျြမှာ အငွငျးပှားစရာမရှိ ပျေါလှငျပါပွီ။
ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒနှေငျ့ပတျသကျ၍ ၁၉၄၇ ခုနှဈ တှငျ တောငျတနျးသားမြား စညျးလုံး ညီညှတျရေးအဖှဲ့ (SCOUHP)က အခကျြ (၇)ခကျြကို တငျပွခဲ့ပွီး ၁၉၆၁ ခုနှဈတှငျ တောငျကွီး ညီလာခံမှာ ပွညျနယျမြား ညီညှတျရေးအဖှဲ့က မူ(၅)ခကျြကို သဘောတူတငျပွခဲ့ပါသညျ။ လကျရှိ အခွခေံဥပဒပွေငျဆငျရေး(၄၅)ဦး ကျောမတီ မှာ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားက အခကျြပေါငျး ထောငျ ဂဏနျးတငျသှငျးခဲ့သညျဆိုသျောလညျး ဖကျဒရယျ အင်ျဂါရပျနှငျ့ တိုငျးရငျးသားမြား အစဉျအဆကျ တောငျး ဆိုခဲ့သညျ့အဓိကကဏ်ဍ သို့မဟုတျ မူ ဆိုလို့ (၁၂)ခကျြ ခနျ့ဖွငျ့ စုစညျးလို့ရပါသညျ။ ယငျးအခကျြမြားအပျေါ NLD က ဘယျလောကျအထိ ထညျ့သှငျးစဉျးစားပေးသ လဲ၊ အပွောနှငျ့ လကျတှဘေ့ယျလောကျ ညီညှတျသလဲ လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ….
နိုငျငံတျောအမညျ၊ ပုဒျမ(၂)ရခိုငျ(ANP)ပါတီ၊ ရှမျး(SNLD)နှငျ့ အခွားတိုငျးရငျးသားပါတီအမြားစုက နိုငျငံအမညျနာမတှငျ ]ဖကျဒရယျ}ဆိုသညျ့ စကားရပျ ကိုဖွညျ့စှကျရနျ အဆိုပွုဆှေးနှေးကွသျောလညျး NLD က ဆှေးနှေးခွငျးမရှိ။ ထို့ပွငျ နိုငျငံရေးစနဈ(ပုဒျမ-၈)နှငျ့ပတျသကျ၍ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားက “ဖကျဒရယျ ဒီမိုကရစေီ”ဟု ဖကျဒရယျစကားရပျကို ရှမှေ့ာထားခငျြ ကွသျောလညျး NLD က ဒီမိုကရစေီစကားရပျကို ရှမှေ့ာထားရှိလိုသညျ။
နိုငျငံဖှဲ့စညျးတညျဆောကျပုံ (ပွညျနယျမူ)၊ ပုဒျမ(၉)(၄၉)တိုငျးရငျးသားပါတီအမြားစုက လူမြိုးနှငျ့ လူမြိုးမြား အခွခေံ၍ ပွညျနယျ (Constituent Unit) ဖှဲ့စညျးရနျအဆိုပွုဆှေးနှေးကွသညျ။ သို့သျော NLD ပါတီ က မှတျခကျြ တစုံတဈရာမပွုခွငျးဖွငျ့ လကျရှိ ပုံသဏ်ဍာနျကို သဘောကကြွောငျးပွသသှားသညျ။ အသေးစိတျအားဖွငျ့ ရှမျး (SNLD)က လူမြိုးကွီး(၈)မြိုးကိုအခွခေံသော (၈)ပွညျနယျမူကိုတငျပွပွီး မှနျပါ တီ (MNP)က အမြိုးသား (၈) ပွညျနယျနှငျ့ တနင်ျသာရီ၊ ပဲခူး၊ ရနျကုနျနှငျ့ ဧရာဝတီ အမြိုးသားမြား(၄)ပွညျ နယျ၊ စုစုပေါငျးပွညျနယျ (၁၂)ခုမူကို တငျပွခဲ့သညျ။ (SNLD က ပွညျနယျဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒေ သီးခွား ထားရှိခှငျ့ကိုလညျး အဆိုပွုသညျ)။
ခှဲမတှကျရ၊ ပုဒျမ(၁၀)တိုငျးရငျးသားပါတီမြား က ယငျးပုဒျမကို ပယျဖကျြဖို့ အဆိုပွုကွသညျ။ ပုဒျမ (၂၀)(င)မှာ ပွဋ်ဌာနျးသညျ့ ဒို့တာဝနျအရေး(၃)ပါးတှငျ ပွညျထောငျစုမပွိုကှဲရေးနှငျ့ အခြုပျအခွာအာဏာ တညျတံ့ခိုငျမွဲရေးတို့ ထညျ့သှငျးထားပွီးဖွဈသညျ့ အတှကျ ဤကဲ့သို့သော အနှုတျလက်ခဏာဆောငျသညျ့ ကနျ့သတျခကျြမှုသညျ အပိုဖွဈသောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးသညျ လကျရှိငွိမျးခမျြးရေးကို တဈဆို့စသေညျ့ အခကျြတဈခုလညျးဖွဈလရော NLD အနဖွေငျ့ သဘောထားတငျပွခွငျးမရှိခွငျးမှာ တပျမတျောနှငျ့ ကွံ့ခိုငျရေးပါတီနှငျ့ တသဘောတညျးဖွဈကွောငျး ပွသရာရောကျသှားသညျ။
မွပေိုငျဆိုငျခှငျ့၊ ပုဒျမ(၃၇)ဤပုဒျမကွောငျ့ လကျရှိအခြိနျ နိုငျငံသားမြား/တိုငျးရငျးသားမြား မွပေိုငျဆိုငျခှငျ့မရှိ ဖွဈနရေခွငျးဖွဈသညျ။ ၂၀၁၇ခုနှဈ၊ မတျလ(၂၉)တှငျ ခြုပျဆိုသော ၂၁ ရာစုပငျလုံ၏ ပွညျ ထောငျစုသဘောတူ စာခြုပျအပိုငျး(၁)မှာ နိုငျငံ သားတိုငျး မွယောပိုငျဆိုငျခှငျ့ကို ထညျ့သှငျးထားပွီး ဖွဈသျောလညျး NLD အနဖွေငျ့ ဆှေးနှေးရပျတညျ ပေးရနျပကျြကှကျနဆေဲဖွဈသညျ။ ရှမျးပါတီက ပွညျ နယျသားမြားပိုငျဆိုငျမှုဟု တငျပွပွီး မှနျပါတီက တိုငျး ရငျးသားပွညျသူလူထုသညျ ပိုငျရှငျဖွဈသညျဟု အသီး သီးတငျပွကွသညျ။ တိုငျးရငျးသားမြားအနဖွေငျ့ နိုငျငံ သားမွပေိုငျဆိုငျခှငျ့သကျသကျမဟုတျဘဲ တိုငျးရငျး သားမွပေိုငျ ဆိုငျခှငျ့ကိုပါ အာမခံရလိုသညျ။
ပွညျထောငျစုအဆငျ့ လှတျတျော၊ ပုဒျမ(၇၄၊ ၇၇၊ ၈၀) တိုငျးရငျးသားမြားက ပွညျထောငျစုမှာ အာဏာ တူပေးသညျ့ လှတျတျော(၂)ရပျ စနဈထား ရှိရေးကို လိုလားကွသညျ။ ယခု ၂၀ဝ၈ခွေ-ဥသညျ လကျတှတှေ့ငျ လှတျတျော(၃)ရပျသဖှယျဖွဈပွီး ပွညျ ထောငျစုလှတျတျော ထားရှိခွငျးဖွငျ့ တိုငျးရငျးသားမြား အားကိုးသော အမြိုးသား လှတျတျောကို လဖွေတျ အောငျလုပျထားသလိုဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့တိုငျးရငျး သားပါတီမြားက ယငျးအလှာကို ပွငျဆငျရနျ တငျပွ ထားကွသျောလညျး ထုံးစံအတိုငျး NLD က ဆှေးနှေး ခွငျး လုံးဝမပွုပေ။
ပွညျနယျအစိုးရဖှဲ့စညျးခှငျ့၊ ပုဒျမ(၂၆၁)— ကိုယျ့ ပွညျနယျက ကိုယျ့ပွညျနယျအစိုးရလှတျလပျစှာ ရှေးခယျြခှငျ့ကို ဤပုဒျမဖွငျ့ ပိတျပွငျထားပွီး ဗဟိုမှ သမ်မတက တဈပွညျ ထောငျစနဈဖွငျ့ ရှေးခယျြခနျ့အပျ သညျ။ ယငျးသညျ ဖကျဒရယျစနဈနှငျ့ဆနျ့ကငျြပွီး တိုငျးရငျးသားမြား ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ကို ပိတျပငျ ခွငျးဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား အပါအဝငျ ကွံ့ခိုငျရေးပါတီနှငျ့ တပျမတျောကိုယျတိုငျ ပွငျဆငျသငျ့ပွီဟု အဆိုပွုကွပွီးဖွဈသျောလညျး NLD က တဈခှနျးတဈပါဒမှ ဆှေးနှေးခွငျး မရှိခွေ။
မွို့နယျနှငျ့ ခရိုငျ အုပျခြုပျရေး၊ ပုဒျမ(၂၈၈) ဗဟိုခြုပျကိုငျမှုလြှော့ခရြေးအတှကျ အက်ခရာကသြညျ့ မွို့နယျနှငျ့ ခရိုငျအုပျခြုပျရေးကို လကျရှိထှအေုပျဌာန အစား လူထုတိုကျရိုကျ ရှေးကောကျသညျ့ စနဈဖွငျ့ ပွောငျးလဲရနျ အခွားပါတီမြားက အဆိုပွုကွသျော လညျး ဗဟိုအစိုးရအာဏာကို နောငျအစိုးရမြားတှငျ ဆကျလကျခြုပျကိုငျရနျ ယုံကွညျမှုရှိသော ပွောငျးလဲ ခြိနျတနျပွီအစိုးရအနဖွေငျ့ ပွောငျးလဲလို ခွငျး မရှိပေ။ ပကတိအနအေထားကို အသားကဟြနျ တူသညျ။
ရုံးသုံးဘာသာစကား၊ ပုဒျမ(၄၅၀) လကျရှိတှငျ မွနျမာစာ(ဗမာစာ)တဈခုတညျးကိုသာ ရုံးသုံးစာအဖွဈ အသိအမှတျပွုသညျ။ အခွားတိုငျးရငျးသားဘာသာ စကားမြားကို အသိအမှတျမပွုပါ။ ထို့ကွောငျ့ ရှမျး (SNLD) နှငျ့ ရခိုငျ(ANP)ပါတီတို့က အိန်ဒိယနိုငျငံကဲ့သို့ (၃)ဘာသာ ရုံးသုံးစာစနဈမြိုးကို တငျပွကွသညျ။ မွနျမာ(ဗမာ)၊ အင်ျဂလိပျနှငျ့ ပွညျနယျရှငျဘာသာစကား မြား စသညျဖွငျ့။ NLD သညျ လကျရှိစနဈကို စောဒက မတကျပေ။
ဘာသာရေး၊ ပုဒျမ(၃၆၁၊ ၃၆၃) ဤပုဒျမမြား သညျ ဦးနု၏ အမှဆေိုးမြားဖွဈသညျ။ ဒီမိုကရစေီနိုငျငံ မြားတှငျ သာသနာရေးဝနျကွီးဌာနထားရှိ ရိုးထုံးစံမရှိ။ ဘာသာရေးဘကျလိုကျမှု မရှိသငျ့။ NCA စာခြုပျ အပိုဒျ(၁)(င) မှာလညျး ‘ဘာသာရေးနှငျ့ နိုငျငံရေး ရောယှကျခွငျးမရှိသော နိုငျငံတျော တညျဆောကျရနျ’ဟု အတိအလငျး ဖျောပွထားပွီးဖွဈသညျ။ ရှမျးပါတီက ပုဒျမ(၃၆၁)၏ ဗုဒ်ဓဘာသာကို ဂုဏျထူးဝိသသေဖွငျ့ ပွညျ့စုံသော (special position)ဆိုသညျ့စကားရပျအား ပယျဖကျြရနျအဆိုပွုပွီး ကခငျြပါတီ(KSDP)က ပုဒျမ (၃၆၃)ကို ပယျဖကျြရနျ အဆိုပွုသညျ။ သို့သျော NLD က ရငေုံနှုတျပိတျနရေသညျ။
အခွခေံဥပဒပွငျဆငျရေး၊ ပုဒျမ(၄၃၆) စဈမှနျ သော ဖကျဒရယျစနဈကငျြ့သုံးသညျ့နိုငျငံအမြားစု (အမရေိကနျ၊ ကနဒေါ၊ ဆှဈဇလနျ၊ ဩစတေးလြ၊ တောငျအာဖရိက စသညျ့မြား)တှငျ အခွခေံဥပဒေ ပွငျဆငျရေးမှာ ပွညျထောငျစု(ဗဟို)လှတျတျောဆုံး ဖွတျခကျြသကျသကျဖွငျ့ မပွီးပွတျစဘေဲ ပွညျနယျ အမြားစု(လှတျတျော)၏ သဘောတူညီခကျြရရှိရနျ လိုအပျပါသညျ။ လူဦးရအေမြားစုက ကွိုကျသလို ခွယျလှယျနိုငျခွကေို ထိုနညျးဖွငျ့ ထိနျးကွောငျးခွငျး ဖွဈသညျ။ ယငျးအခကျြသညျ လကျရှိမွနျမာနိုငျငံမှာ အထူးအရေးကွီးပါသညျ။ NLD အနဖွေငျ့ ထညျ့သှငျး စဉျးစားပေးခွငျးမရှိပေ။
ကွှငျးကနျြအာဏာ၊ ပုဒျမ(၉၈) ဖကျဒရယျနိုငျငံ အမြားစုတှငျွှကငျးကနျြအာဏာကို ပွညျနယျ (Subunit) မြားကို အပျနှငျးလရှေိ့သညျ။ သို့သျော ၂၀ဝ၈ ခွေ-ဥတှငျ ဗဟိုကို ပေးထားသညျ။ တိုငျးရငျးသား ခေါငျးဆောငျမြားက ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးနှငျ့ ဦးနု တို့ခတျေကတညျးကွှကငျးကနျြအာဏာကို ပွညျနယျ မြားကိုပေးဖို့ တစိုကျမတျမတျတောငျးဆိုခဲ့သညျနှငျ့ အညီ ယခုတှငျလညျး တိုငျးရငျးသားပါတီမြားက ထိုသို့ အဆိုပွု ဆှေးနှေးကွသျောလညျး NLD ကမူ နှုတျ ဆိတျနခေဲ့ပါသညျ။
ဥပဒပွေုစာရငျး၊ ဇယား(၁)(၂)(၃)(၅) ဖကျဒရယျစနဈအရ ပွညျနယျ/ဗဟိုအာဏာခှဲဝရေေး တှငျ လကျတှအေ့ကဆြုံးဖွဈသညျ့ ဤဥပဒပွေု ဇယားမြားတှငျ လကျရှိမှာ ဗဟိုက အဆီအနှဈ ၉၉ ရာခိုငျနှုနျးနီးပါးကို ထိနျးခြုပျပွီး ဇယား(၁)တှငျ ထညျ့သှငျးပါသညျ။ ပွညျနယျမြားကို စညျပငျ၊ ယဈမြိုး ခှနျ၊ ကြောကျသှေးခှငျ့ စသညျ့ အကိုငျးအခကျမြားသာ အပျနှငျးထားသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ရှမျး (SNLD) ပါတီက ဗဟို(ပွညျထောငျစု)ဥပဒပွေုစာရငျး အခကျြပေါငျး (၁၅၀)ကြျောထဲက (၅၄)ခကျြကို ပယျဖကျြရနျနှငျ့ ၎င်းငျးကို ပွညျနယျဥပဒပွေုစာရငျးတှငျ (၁၆)ခကျြ၊ ပူးတှဲ ဥပဒပွေုစာရငျး (concurrent list)တှငျ (၂၇)ခကျြ၊ ပွညျနယျ အခှနျဇယား(၅)တှငျ (၃)ခကျြ စသညျ ဖွငျ့ အသီးသီး ဖွညျ့စှကျအဆိုပွုသညျ။ မှနျ၊ ရခိုငျနှငျ့ အခွားတိုငျးရငျးသားပါတီမြားကလညျး အလားတူ ဗဟိုခြုပျကိုငျမှုလြှော့ခသြညျ့ အခကျြမြားမြားကို တငျပွကွသညျ။ ထိုအခကျြမြားတှငျ တိုငျးရငျးသားမြား လိုလားသော သယံဇာတခှဲဝမှေု၊ ပညာရေး (မိခငျ တိုငျးရငျးသား ဘာသာစကား အခွပွေုပညာ သငျ ကွားရေး) စသညျတို့လညျးပါဝငျသညျ။ သို့သျော NLD က တဈခကျြမှ တငျပွခွငျးမပွု။
ခွုံငုံသုံးသပျလြှငျ လကျရှိ NLD ၏ (၁၁၄)ခကျြပါ ခွဥေပွငျဆငျရေး အဆိုပွုခကျြမြားသညျ ဒီမိုကရစေီရေး၊ တပျမတျောအရေး၊ ပါတီတဈခုခါငျး ဆောငျ နှောငျကွိုး ပွစေရေေးနှငျ့ သမ်မတကဏ်ဍတို့ကို သာ ထညျ့သှငျးစဉျးစားပွီး တိုငျးရငျးသားမြားအရေးနှငျ့ ဖကျဒရယျအခွခေံဥပဒေ ပုံဖျောရေးအပိုငျးကို မကျြ ကှယျပွုထားပါသညျ။ တပျမတျောကို မကျြနှာပူလို့ လားဆိုတော့လညျး တပျခြုပျကိုယျတိုငျ ပွငျသငျ့ ကွောငျး တရားဝငျပွောထားသညျ့ ပုဒျမ(၂၆၁)ကိုပငျ မကျြနှာလှဲခနြပွေနျရော။ သို့တညျးမဟုတျ NLD ၏ ပွောငျးလဲခြိနျတနျပွီ မူဝါဒလမျးစဉျမှာ တိုငျးရငျးသား အရေးကို အစကတညျးက ထိနျခနျြခဲ့လသေလား။